Isimo sezulu esishubisa umnkantsha kuleli sonto | News24
Isimo sezulu esishubisa umnkantsha kuleli sonto
Johannesburg – Kulindeleke ukuthi kube namakhaza ashubisa umnkantsha kuleli sonto eNingizimu Afrika ngokusho kwabe-SA Weather Service.
I-SA Weather Service ixwayise ngokuthi kungenzeka likhithike, linethe futhi amakhaza ashubise esifundazweni saseWestern Cape.
“Kuzoba nezimvula ezihambisana namakhaza ezizosabalala ezindaweni ezahlukene ikakhulukazi esifundazweni saseWestern Cape.
OLUNYE UDADA: Kushone abasolwa ababili bedubulana namaphoyisa eThekwini
Ulwandle luzoba namandla kakhulu kuze kushaye uLwesihlanu,” kusho i-SA Weather Service ngesitatimende.
Kulindeleke ukuthi ngokuhamba kwesonto la makhaza nezimvula zikapakele nakwezinye izifundazwe okubalwa kuzo iLimpopo, Gauteng, Mpumalanga neKwaZulu Natal.
IWestern Cape ingase ihlangabezane nezimvula eziza ngamadla.